यदि म प्रधानमन्त्री भए युवालाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्छु : गगन थापा – Enepali News
July 14, 2020 264
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले अहिले देशको प्रमुख आवश्यकता रोजगारी भएको बताएका छन् उनले नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम फ्रन्टलाईनमा नागरिक न्युजका पत्रकारश्रीराम पौडेलसँग कुराकानी गर्दैरेमिट्यान्सले देश बदल्न नसकिने बताएका हुन्फ्रन्टलाइनमा एक पाठकले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदैँ उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको भए रोजगारीलाई
पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका हुन । अहिले म प्रधानमन्त्री थिए भने युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्थे । अहिलेको स्कूलबाट आएका विद्यार्थीहरुलाई रोजगारी दिने अवस्था छैन । नेपालभित्रै रोजगारीको सृजना गर्नु पर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय सोच्नु भएको छैन। पार्टीको महाधिवेशको सन्दर्भमा उनले गतिशिल पार्टीमा झगडा हुने बताए । सभापति देउवा
नेतृत्वको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिदैं छ । त्यसका लागि १४ औं महाधिवेशनको मिति अहिलेसम्म पनि तोकिएको छैन । केन्द्रीय समितिको समय सकिएपछि के हुन्छ भन्ने अन्योलका कारण अहिलेको अवरोध आएको हो नेता थापाले भने एउटा गतिशिल पार्टीमा झगडा हुन्छ यो स्वभाविक कुरा हो।पार्टीका वरिष्ट नेता रामचन्द्र नेताको नेतृत्वले चार पटकसम्म केन्द्रीय
समितिको बैठक बहिस्कार गरिसकेको छ ।‘अघिल्लो महाधिवेशनमा मैले महामन्त्री लड्ने सहास नगरेको भए मेरा सिनियर नेताहरुले ठूलो पदका लागि दावासमेत गर्न नसक्ने अवस्था थियो । छ सात जना नेता पार्टीको सभापति दाबी गर्ने हैसियतका हुनुहुन्छ । हामीले सबैसँग छलफल गरिरहेका छौं ।प्रतिपक्षको डिउटी सरकारले गरेका खराब काम रोक्ने हो ।
अहिले संघीय संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयक पारित भयो भने स्वतन्त्रता सकिन्छ। हामीसँग संसदमा शक्ति नभएका कारण जनतालाई सचेत बनाएर सडक तताउने काम गर्ने छौंउनले भनेएमसिसीको विषय छिट्टै टुंग्याउन उनले सुझाव दिए । एमसिसीको विषय छ सरकारले यो विषय छिटो टुंग्याओस्। यो नेपालको प्रतिष्ठाको विषय हो। यो विषयलाई म
धेरै उछाल्न चाहन्न ।’ उनले एमसिसी नेकपाभित्रको बहसको विषय बन्नु दुःखदायी भएको धारणा राखेनेतृत्व विकासमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता छ। भएका युवा विदेशिएका छन । यस्तो अवस्थामा ल्याटरल इन्ट्री नहुँदा समस्या भएको हो । अहिले पार्टी नेतृत्वमा आउने ढोका नै बन्द भएको छ। त्यो पनि समस्याको विषय हो’ उनले भने । प्रतिपक्षले खरोरुपमा उत्रिन
सकेको छैनम त्यो विषय स्विकार गर्छु । हामी देखिनु पर्ने ठाउँमा देखिएका छैनौं ।
Prevकोरोना भाइरसबाट विश्वमा ५ लाख ७५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
Nextभारतले कोसी ब्यारेजको ढोका थुन्दा १ लाख ५० हजार नेपालीको ज्यान जोखिममा
जनावरमा पनि मानवता हुन्छ : सुशान्तको कुकुरको पनि मृत्यु !
‘कोरोना फाइटर’ डा. नितु भन्छिन्– हामी नलडे को लड्छ ?
कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन नै सुरु, चीन र भारतसहित ७ वटा कम्पनीमा उत्पादन हुँदै (2165)